1 Madzimambo 17:1-24
17 Zvino Eriya+ muTishbhi wokuvagari vokuGiriyedhi+ akati kuna Ahabhi: “NaJehovha mupenyu,+ iye Mwari waIsraeri wandimire pamberi pake,+ mumakore aya hakuzovi nedova kana mvura,+ kutoti ndarayira neshoko rangu!”+ 2 Zvino shoko+ raJehovha rakasvika kwaari, richiti: 3 “Ibva pano, unange nechokumabvazuva, uvande+ mumupata une rukova weKeriti uri kumabvazuva kwaJodhani. 4 Uchanwa+ mvura yomumupata une rukova, uye ndicharayira makunguo+ kuti akupe zvokudya ikoko.”+ 5 Akabva aenda, akaita maererano neshoko raJehovha,+ naizvozvo akaenda akagara mumupata une rukova weKeriti uri kumabvazuva kwaJodhani. 6 Makunguo aimuunzira chingwa nenyama mangwanani uye chingwa nenyama manheru, uye akaramba achinwa+ mvura yomumupata une rukova. 7 Asi pakapera mazuva akati, mupata une rukova wakaoma,+ nokuti kwakanga kusina kunaya mvura zhinji panyika. 8 Zvino shoko raJehovha rakasvika kwaari, richiti:+ 9 “Simuka, enda kuZarefati,+ reSidhoni, ugare ikoko. Tarira! Ndicharayira mumwe mukadzi ari ikoko, chirikadzi, kuti akupe zvokudya.” 10 Naizvozvo akasimuka, akaenda kuZarefati, akasvika pasuo reguta racho; uye akaona mumwe mukadzi, chirikadzi, akanga achiunganidza huni. Naizvozvo akashevedzera kwaari akati: “Ndapota, ndiunzirewo mvura shomanana mumudziyo kuti ndinwe.”+ 11 Paakanga ava kuenda kunoitora, akashevedzera kwaari akati: “Ndapota, ndiunzirewo chimedu chechingwa+ muruoko rwako.” 12 Iye akati: “NaJehovha Mwari wenyu mupenyu,+ handina keke reraundi,+ asi tsama+ yefurawa iri muchirongo chikuru nemafuta mashomanana+ ari muchirongo chiduku; uye tarirai ndiri kuunganidza huni shomanana, uye ndichaenda ndozvigadzirira ini nomwanakomana wangu chimwe chinhu, todya, tofa.”+ 13 Eriya akabva ati kwaari: “Usatya.+ Enda uite sezvawataura. Imbotanga wandigadzirira keke duku reraundi nezviripo,+ uuye naro kwandiri, wozozvigadzirira iwe nomwanakomana wako chimwe chinhu. 14 Nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Furawa iri muchirongo chikuru haizoperi, uye mafuta ari muchirongo chiduku haazoperi kusvikira pazuva richanayiswa mvura zhinji panyika naJehovha.’”+ 15 Naizvozvo akaenda, akaita sezvakanga zvataurwa naEriya; uye akaramba achidya, iye pamwe chete naye neimba yake, kwemazuva mazhinji.+ 16 Furawa yaiva muchirongo chikuru haina kupera, nemafuta aiva muchirongo chiduku haana kupera,+ sezvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa Eriya. 17 Zvino pashure pezvinhu izvi mwanakomana womukadzi wacho, tenzikadzi weimba yacho, akarwara, kurwara kwake kukanyanya kwazvo zvokuti akaguma kufema.+ 18 Iye akati kuna Eriya: “Ndinei nemi,+ haiwa imi munhu waMwari wechokwadi? Makauya kwandiri kuti kukanganisa kwangu kuyeukwe+ uye kuti muuraye mwanakomana wangu.” 19 Asi iye akati kwaari: “Ndipe mwanakomana wako.” Akabva amutora pachipfuva chake, akakwira naye kuimba yepamusoro pedenga remba,+ maakanga achigara, akamuradzika pamubhedha wake.+ 20 Akatanga kushevedzera kuna Jehovha achiti: “Haiwa Jehovha Mwari wangu,+ mungaunzawo chinhu chinokuvadza pachirikadzi yandiri kugara nayo ndiri mutorwa nokuuraya mwanakomana wayo here?” 21 Akazvambarara pamusoro pomwana+ wacho katatu, akashevedzera kuna Jehovha akati: “Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndapota, dzosai mweya+ womwana uyu maari.” 22 Jehovha akazoteerera inzwi raEriya,+ zvokuti mweya womwana wacho wakadzoka maari, akava mupenyu.+ 23 Zvino Eriya akatora mwana wacho, akadzika naye mumba achibva muimba yepamusoro pedenga remba, akamupa kuna amai vake; uye Eriya akabva ati: “Ona, mwanakomana wako mupenyu.”+ 24 Mukadzi wacho akabva ati kuna Eriya: “Chokwadi, zvino ndava kuziva kuti muri munhu waMwari+ uye kuti shoko raJehovha riri mumuromo menyu nderechokwadi.”+